आईएमई समूह : बैङ्क, बीमा र अटोमोबाइलमा लगानी थप्दै | गृहपृष्ठ
Home कम्पनी प्रोफाइल आईएमई समूह : बैङ्क, बीमा र अटोमोबाइलमा लगानी थप्दै
on: June 27, 2018 कम्पनी प्रोफाइल, बजार
आईएमई समूह : बैङ्क, बीमा र अटोमोबाइलमा लगानी थप्दै
नेपाली रेमिट्यान्स आप्रवाह बजारको ३५ देखि ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आईएमई समूहले रेमिट्यान्स आप्रवाह व्यवस्थापन तथा अन्य क्षेत्रमा समेत गरेर रू. १ अर्बभन्दा धेरै लगानी गरेको छ । सो लगानीबाट समूहले वार्षिक रू.१ खर्ब २९ अर्ब (१२० करोड डलर) को कारोबार गर्छ ।
आईएमई समूहमा विभिन्न १० क्षेत्रका १६ कम्पनी आवद्ध छन् । समूहका सबै कम्पनीमा गरी ३ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । बैङ्क, बीमा र अटोमोबाइलको क्षेत्रमा लगानी बढाएर रू. १० अर्बभन्दा धेरै पुर्‍याउने योजनामा रहेको समूहले आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स, हाथवे ग्रूप र भाटभटेनीसँग सहकार्य गर्छ ।
गैरव्यावसायिक पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका दुई दाजुभाइ चन्द्रप्रसाद ढकाल र हेमराज ढकालले व्यावसायिक क्षेत्रमा पाइला हालेको धेरै भएको छैन । तैपनि आईएमई समूहले सबैभन्दा छिटो प्रगति गर्ने व्यावसायिक घरानाका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ ।
समूहको प्रमुख व्यवसाय
समूहले आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्समार्फत् बीमा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । आईएमई समूहले सन् २०१४ मा एनबी इन्स्योरेन्सको ४० प्रतिशत हिस्सा खरीद गरेपछि त्यसैलाई आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको रूपमा पुनः ब्राण्डिङ गरेको हो ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको स्थापनापछि समूहले बीमाक्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । २०७४ भदौ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको जीवन बीमा कम्पनी आईएएम लाइफ इन्स्योरेन्समा रू. १ अर्ब ४० करोड चुक्तापूँजी छ । जीवन बीमा कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर संस्थापक र बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको रहने व्यवस्था छ ।
आईएमई समूहले १ वर्षअघिदेखि रू. ३ अर्ब २० करोडको लगानीमा चन्द्रागिरि हिल्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा होटल तथा रेष्टुराँ एवम् थानकोटबाट चन्द्रागिरि पुग्ने केबुलकार सेवा पर्दछन् । काठमाडौंदेखि ७ किलोमीटरको दूरीमा, समुद्री सतहदेखि २ हजार ५ सय ५१ मीटरको उचाइमा रहेको चन्द्रागिरि हिल्समा केबुलकार चढेर भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्ने र प्राकृतिको आनन्द चाहने पर्यटकको घुइँचो लाग्छ ।
डिस मिडिया लिमिटेड नेपालमा सबैभन्दा छिटो केवल टेलिभिजन सेवा दिने डिजिटल अपरेटर्स हो । डिस टीभी र होम टीभी सन् २०१० मा आपसमा गाभिएर बनेको ‘डिस होम’मा सन् २०११ देखि स्याण्डमार्टिन इण्टरनेशनल पनि शेयरहोल्डर छ । काठमाडौंको तिनकुनेमा मुख्य कार्यालय रहेको डिस मिडियाका देशभर ८० वितरक छन् । डिजिटल भू–उपग्रह प्रसारण सेवा दिन कम्पनीसँग उच्च गुणस्तरको पूर्वाधार छ । यसका ग्राहक सङ्ख्या सन् २०१६ मै साढे ७ लाख नाघेको कम्पनीको दाबी छ ।
आईएमई फाइनान्समार्फत बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आईएमई समूह ग्लोबल बैङ्कको पनि मुख्य प्रवर्द्धक थियो । सन् २०१२ मा ती दुवै संस्था र लर्ड बुद्ध फाइनान्स मर्ज गरेर ग्लोबल आईएमई बैङ्कको स्थापना भएको हो । सो बैङ्कमा पछि कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैङ्क, प्यासिफिक डेभलपमेण्ट बैङ्क र रिलायबल डेभलपमेण्ट बैङ्क पनि मर्ज भएका छन् ।
यो बैङ्कमा आईएमई समूहको रू. १ अर्ब लगानी रहेको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको रू. ८ अर्ब ८८ करोड चुक्तापूँजी छ । यो बैङ्कले लण्डनको फाइनान्सियल टाइम्सबाट प्रकाशित हुने द बैङ्कर म्यागेजिनद्वारा प्रदान गरिने ‘बैङ्क अफ द इयर अवार्ड २०१४’ अवार्ड पाएको छ । त्यसका साथै समूहले लण्डनको इण्टरनेशनल फाइनान्स म्यागजिनबाट ‘बेष्ट इण्टरनेट बैङ्क २०१६’ को सम्मान पनि पाएको छ ।
आईएमई समूहअन्तर्गतको इण्टरनेशनल मनी एक्स्प्रेस (आईएमई) सन् २००१ बाट सञ्चालनमा आएको हो । आईएमई मनी एक्सप्रेसमा समूहका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक दुवैको लगानी छ । आईएमई मनी ट्रान्सफर गर्ने नेपालको पहिलो प्राइभेट कम्पनी हो ।
समूहले रोजगारीका लागि विदेशिने थुप्रै युवालाई आफ्नो कमाइ सुरक्षित र सहज तवरले नेपालमा आफन्तलाई पठाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले शुरू गरेको व्यवसाय निकै चाँडै स्थापित भयो । अहिले विश्वका विभिन्न ठाउँमा रोजगारी गर्ने नेपालीहरू आफ्नो कमाइ स्वदेश पठाउन आईएमई रेमिटलाई नै रोज्ने गर्दछन् । गैरआवासीय नेपाली कामदारमाझ आईएमई रेमिट लोकप्रिय पनि छ ।
आईएमई रेमिट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने सरकारी इजाजतप्राप्त औपचारिक संयन्त्र हो । समूहले आईएमई रेमिटलाई विश्वमा जहाँ काम गरे पनि आफ्नो देश र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने मान्यता स्थापित गराउन सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै आएको छ । ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा दिँदै आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्न समूह सफल छ ।
समूहले आईएमई रेमिटको सञ्जाल विश्वभर फैलिएको दाबी गर्ने गरेको छ । संसारका विभिन्न स्थानमा यस रेमिटका १ लाख ५० हजारभन्दा धेरै पेआउट स्थल छन्, जहाँबाट समूहले विप्रेषण सङ्कलन तथा वितरण गर्ने गर्दछ । समूहको आईएमई रेमिटमा मात्रै १ हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् ।
२०६१ सालमा स्थापना भएको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडमा आईएमई समूह प्रमुख शेयर होल्डर हो । यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य भनेको ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान, विकास र परामर्श गरी सेवा प्रदान गर्नु हो । गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्था एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट लिमिटेडले सन् २०१३ मा हिमालयन पावर पार्टनरसँग साझेदारी गरेपछि यो कम्पनी प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरण भएको हो । यस कम्पनीले लमजुङमा २७ मेगावाटको दोर्दीखोला हाइड्रोपावर परियोजना, रोवस्ट इनर्जीले म्याग्दीमा निर्माण गर्दै रहेको ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला परियोजनामा लगानी गरेको छ ।
माउण्ट पुमोरी एयर कार्गो
हवाई माध्यमबाट छिटोछरितो सेवा दिन समूहले सन् १९९० मा माउण्ट पुमोरी एयर कार्गो स्थापना गरेको हो । माउण्ट पुमोरी स्थापना हुनुअघिसम्म समूहले आफ्ना ग्राहकलाई जलमार्ग हुँदै विदेशबाट आउने सामग्रीहरू सडक सञ्जालमार्फत नै पुर्‍याउने गर्दथ्यो । यसो गर्दा एकातिर समय र लागत बढी लाग्ने अनि अर्कातिर सरसामान टुटफुट हुने र हराउने जोखीमसमेत रहने भएकाले समूहले माउण्ट पुमोरीलाई विश्वासिलो कार्गाे सेवाप्रदायकका रूपमा स्थापना गरेको हो ।
स्थापनाकालदेखि नै कम्पनीले हवाई सुविधा भएका विश्वका जुनसुकै ठाउँबाट ग्राहकलाई कार्गाे ढुवानीको सुविधा दिँदै आएको छ । यसले सीएम इण्टरप्राइजेजसँग साझेदारीमा काम गरिरहेको छ । सीएम इण्टरप्राइजेजले स्वदेशी बजारबाट नेपाली उत्पादन खरीद गर्ने र विदेशमा लगेर विक्रीवितरण पनि गर्दछ । आईएमई समूहले सञ्चालन गरेको कार्गाे कम्पनी नेपालमा चाँडो विकास हुने कार्गाे सेवा प्रदायकमध्ये एक हो । व्यापारिक क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएको यस कम्पनीले अहिले यूरोप, एशिया र अमेरिका महादेशका २ सयभन्दा बढी स्थानबाट कार्गाे आदान–प्रदान सेवा दिँदै आएको छ ।
आईएमई डिजिटल सोलुशन (आईएमई डिजिटल) द्वारा आईएमई पे सञ्चालनमा आएको हो । आईएमई पे मोबाइल पैसा हो, जसले व्यक्तिदेखि व्यक्तिमा पैसा हस्तान्तरण गर्ने, विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट तथा पसलहरूबाट सामान खरीद गर्दा र आवश्यक सुविधा उपयोग गरेबापतको बिल भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने कार्यमा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सहयोग गर्छ । यस सेवाद्वारा नेपालमा वा लिङ्क गरिएको बैङ्क खातामार्फत कुनै पनि आईएमई पे एजेण्टमार्फत पैसा लोड गर्न वा रकम फिर्ता लिन सकिन्छ । यसका लागि समूहले ग्लोबल बैङ्क अफ काठमाण्डू, आईएमई र सनराइज बैङ्कसँग सहकार्य गर्दछ ।
पुस्तागत र संस्थागत संरचना
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष
हेमराज ढकाल, प्रबन्ध निर्देशक
आईएमई समूहले १ खर्ब २९ अर्ब वार्षिक कारोबार गर्छ । समूहले ३५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स
सीएम ट्रेडिङ इण्टरप्राइज
ट्राभल एण्ड टूर्स
आईएमई ट्राभल एण्ड टूर्स
काठमाडौं फन पार्क
हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड (दोर्दी खोला हाइड्रोपावर–२७ मेवा) र रोबष्ट इनर्जी (मिस्त्री खोला–४२ मेवा)
माउण्टेन इनर्जी प्राइभेट लिमिटेड
लगानी योजना :
आईएमई वालेट सञ्चालनमा ल्याउने
व्यवसाय विस्तार गरी रू. १० खर्बभन्दा बढी बनाउने
बैङ्क, बीमा र अटोमोबाइलमा लगानी बढाउने